Yemen : Tsindrim-peo mikasika ny fampianarana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2013 2:19 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Español, Italiano, македонски, عربي, Aymara, Português, English
Amin’ny firenena iray izay manakaiky ny 40 isan-jato ny tahan’ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra eo amin’ny lahy sy vavy (15 taona no miakatra), ny fampianarana sy ny fandrisihana ireo vehivavy sy ny tanora dia tsy maintsy ilaina mba hisian’ny fampandrosoana mivaingana ao Yemen.
Nanoratra tanaty lahatsorara am-bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Tokony ho zo ny vakiteny fa tsy tombontsoa” i Atiaf Alwazir, mafana fo sady mpikaroka, hanasongadinany ny lanjan’ny fampianarana ny vehivavy.
Nanentana izy hoe :
Ndeha isika hiasa miaraka mba hangataka fanovana mazava, ary hangataka amin’ny governemanta mba hamerenana ny fandaharanasa fampianarana mamaky teny sy manoratra izay nahazatra azy tamin’ny lasa ny fampiasàna azy. Tsy maintsy manao ny zo amin’ny fampianarana ary ny fiahiana ara-pahasalamana ho laharam-pahamehana ara-politika koa isika amin’ny fivoriana fifanakalozan-kevi-pirenena (izay nanomboka ny volana Martsa 2013 ary vinavinaina hifarana ny vola Aogositra 2013)
Ankizilahy sy ankizivavy efa taonan’ny tokony hianatra ao Yemen. Sarin’i Arwa Othman
Arwa Othman , mafana fo sady mpitarika ny Vondrona Mpandinika ny Zo sy Fahafahana nandritra ny fifanakalozan-kevitra nasionaly, nanipika ny maha tsara ny fampianarana nefa koa nanampy tao amin’ny lahatsoratra tao amin’ny pejiny Facebook [ar] hoe :
Tsy ny zo mikasika ny fampianarana izay voalaza ao amin’ireo fifanarahana mikasika ny zon’olombelona ihany, fa koa tsy maintsy ampidirintsika ao amin’ny maha-izy azy ny sekoly ao amin’ny Repoblikan’i Yémen (Yemen vaovao) ireo lalàna ireo.. ary tsy maintsy ampianarina toy ny taranja fototra mba ho hampiroboroboana kolontsain’ny zon’olombelona, ny fandeferana, ny fiaraha-miaina, ny fandriampahalemana, ny fahalalahana, ny maha-olom-pirenena, ny fitoviana, ny tsy fanavakavahana, ny fahalalahana ao anaty fahasamihafàna, ny fahalalahana ara-pinoana,etc…) izany hoe fanajàna ny maha olona tsy hijerena ny fihodirana, ny maha-lahy na maha-vavy, ny finoana, ny teny, ny firehana politika sy foto-kevitra sns… Manantena isika fa hivoaka amin’io Fihaonana Ara-pifanakalozan-kevitra Nasionaly io ny andalan-teny ho ao anaty lalam-panorenana izay manaja ny zon’ireo taranaka manaraka ho avy